Chineke: Nghọta na nyocha | Martech Zone
Seth na-ajụ nnukwu ajụjụ nke na-abụkarị esemokwu maka ndị njikwa ngwaahịa Software…. You na-eji Intuition ma ọ bụ Nyocha?
Echiche m na nke a bụ na ị bụ ihe siri ike nke abụọ. Mgbe m na-eche gbasara nyocha, ana m eche banyere data. O nwere ike ịbụ data gbasara asọmpi, ojiji, nzaghachi, akụrụngwa na nrụpụta. Nsogbu bụ na nyocha dabere kpamkpam n'akụkọ ihe mere eme, ọ bụghị ihe ọhụrụ na ọdịnihu.
Mgbe m na-arụ ọrụ na ụlọ ọrụ mgbasa ozi ndị ọzọ, ahụrụ m nyocha dị ka isi ihe na mkpebi niile. Nke a adịkarịghị ọhụrụ. Ndi ndu n’ulo oru ihe nlere n’ile ichoputa akwukwo ha n’echere ha rue mgbe onye ozo mere ihe nke gosiputara ezigbo. ha ewe nwaa ime ya. Nsonaazụ bụ ụlọ ọrụ na-anwụ anwụ na ihe ọhụrụ.
Ihe nsonye, ​​n’aka nke ọzọ, nwere ike iduhie mmadụ. Ime mkpebi n’etinyeghị nkọwa zuru ezu nke data ma soro ndị ọkachamara ndị ọzọ ma ọ bụ ndị ahịa tụlee echiche gị nwere ike ịbụ nnukwu ihe egwu. Echiche nke onye na-ere ahịa dị iche na nke onye na-eweta ọrụ. Yabụ - ihe ịga nke ọma nke onye na-eweta ọrụ kensiri ike mkpebi na-atụsi ike na ike ha ịgụ ahịa. Ndi mmadu kwenyere bu uzo di egwu. Na-ekwu Enweghị olileanya.com:
A ole na ole na-adịghị emerụ flakes na-arụ ọrụ ọnụ nwere ike palitere ọtụtụ mbibi.
Echere m na ihe a niile na-agbadata '' ọnọdụ dị egwu ''. Kedu ihe egwu ị bụ ma ọ bụ nzukọ gị dị njikere iji nsonye gị na / ma ọ bụ nyocha gị. Ọ bụrụ n’ị na-egwu ya oge niile, mmadụ ga-agafe gị zụta onye dị njikere itinye ihe egwu. Ọ bụrụ n’ị na-etinye ndụ gị n’ihe egwu mgbe niile, ọ ga-eme ka ọghọm gị daa.
Na ngwaahịa ndị na-emepe emepe, ekwenyere m na nyocha ahụ nwere ike iburu n'uche, ọ bụrụhaala na enwere oke ihe egwu na uru ọ bara. Nnukwu ihe egwu, ya na oke uru kwesiri ka echebara echiche. Nnukwu ihe egwu, uru dị ala ga-eduga na njedebe gị. Ijikwa ihe ize ndụ bụ isi ihe na-eme ka mkpebi dị mma. Ijikwa ihe ize ndụ ekwesịghị ịbụ ihe mgbagwoju anya na ịghara itinye ihe ize ndụ, n'agbanyeghị!